एक जटिल मानव मेरुदण्ड को संरचना प्रत्येक आन्दोलन को हिड्ने गर्दा ब्यालेन्स र परिशोधन कायम गर्न आवश्यक छ। त्यसैले, यो व्यक्तिगत vertebrae movably प्रत्येक अन्य जडान र intervertebral डिस्क द्वारा विभाजित हुन्छन्। तर सबै छैन को मेरुदण्ड को भागहरु यस्तो संरचना छ। Sacral vertebrae मात्र बच्चाहरु र किशोरों मा विभाजित छन्। लगभग 18 वर्ष तिनीहरूले एक ठोस हड्डी गठन, सँगै फ्यूज छन्। यो sacrum भनिन्छ, र यो एक विशेष संरचना छ। यो विभाग छुट्टै विनियोजन गरिएको छ, तर तिनीहरूले यस्तै कार्यहरु रूपमा कहिले काँही, कटि र coccygeal संग संयुक्त।
को मेरुदण्ड को एनाटोमी
मानव ढाड - एक जटिल प्रणाली, अलग vertebrae मिलेर movably जोइन्टहरूमा मार्फत परस्पर, र बंधन को एक अधिकता को एक विशेष संरचना। को vertebrae बीच हिड्ने नरम पाङ्ग्रा राखिएको गर्दा आन्दोलनहरु तकिया गर्न। तिनीहरूले नाश हुनबाट यी तत्व र concussions देखि मस्तिष्क सुरक्षा। यो संरचना मानव गतिशीलता, झुकाव, कुंडा प्रदर्शन हिड्ने गर्दा ब्यालेन्स राख्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ।
प्रत्येक वर्टिब्रा स्पाइनल नहर भित्र विस्तार कि यस्तो जटिल संरचना को खतरा, नसाहरू र रक्त नली को एक अधिकता। त्यसैले, यो सही स्थिति मा मेरुदण्ड राख्न र यो चोट देखि रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण छ। सबै भन्दा साधारण चोट लागेको sprains वा छन् को vertebrae को विस्थापन, herniated डिस्क, विरूपण कपडे।
को मेरुदण्ड को संरचना मा पाँच विभाग हो:
तर कहिलेकाहीं कारण तल्लो प्रभाग को संरचनात्मक सुविधाहरूमा संयुक्त छन्। तिनीहरूले "कटि-sacral मेरुदण्ड को vertebrae" भन्न गर्दा अक्सर मनमा छ, र sacrum र coccyx र तल्लो फिर्ता। आखिर, तिनीहरूले त्यस्तै कार्य, र पनि रोग र तिनीहरूले उस्तै चोट प्रदर्शन।
यो मानव मेरुदण्ड को एक विशेष भाग हो। यो विभाग पाँच vertebrae हुन्छन्। तिनीहरूले एक जटिल संरचना छ र धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य प्रदर्शन। Sacral vertebrae 14-15 वर्ष सम्म मात्र चल्ने जोडिएको छन्। यो उमेर गरेपछि तिनीहरूले बिस्तारै coalesce गर्न थाल्छन्। तल यो प्रक्रिया, को coccyx संग जंक्शन मा सुरु हुन्छ। अन्तमा, sacrum 25 वर्ष एक हड्डी मा परिवर्तित छ। एक वयस्क मानव मा Sacral र coccygeal vertebrae ट्यूटोरियल तल सामना गर्ने भर्टेक्स छन्। को श्रोणि र कम limbs गर्न जडान प्रदान मेरुदण्ड यस आधार।
को sacrum संरचना
यो विभाग मानव मेरुदण्ड जग हो। त्यसैले, बाँकी देखि थोडा अलग sacral vertebrae संरचना। तिनीहरूले अपरिपक्व र फ्यूज करङहरु transverse प्रक्रियाहरू छन्। माथिल्लो भाग मा त्यहाँ संग चाहेको मिश्रित विशेष कान आकारको सतह हो को श्रोणि हड्डी। यो संयुक्त sacroiliac जोइन्टहरूमा भनिन्छ। कारण sacrum रूपमा मेरुदण्ड बाँकी रूपमा चुस्त छैन भन्ने तथ्यलाई गर्न, यो कुनै intervertebral डिस्क छ। तर त्यहाँ धेरै तंग बंधन को धेरै बल हड्डी प्रदान गर्दछ।
aitchbone यी भागहरु आवंटित:
pelvic भाग भित्री सामना;
पृष्ठीय वा posterior सतह;
दुई पार्श्व पक्ष अंश;
विस्तृत आधार उकालो सामना;
tapered शिखर तलतिर।
विशेष गरी sacral
Sacrum - यो मेरुदण्ड जग, शरीर को तल्लो भागमा यसको जडान को स्थान हो। यो व्यवस्था र धेरै सुविधाहरू छ कि मेरुदण्ड को कार्य को कारण:
यो पाँच फ्यूज vertebrae हुन्छन्;
यो विभाग पनि मेरुदण्ड सबै खुलारूपमा हेरविचार लिन्छ;
sacrum एक त्रिकोण, टिप निर्देशित तल को आकार मा एक हड्डी छ;
त्यहाँ vertebrae बीच कुनै डिस्क छन्;
sacrum को श्रोणि को पछिल्लो पर्खाल खेल्छ;
यो pelvic बज्न संलग्न बलियो बंधन निश्चित छ;
को sacrum को convex posterior सतह र अन्य धक्का माथि एक प्रबन्ध जुन पाँच ठाडो ridges, छ;
जब कटि वर्टिब्रा sacrum संग संयुक्त ठूलो प्रक्षेपण, को श्रोणि मा निर्देशित छ जो एक विशेष संयुक्त, खेल्छ;
5 sacral vertebrae, को coccygeal विभाग जोडिएको छ sacrococcygeal संयुक्त गठन।
को sacral vertebrae कस्तो कार्यहरु प्रदर्शन गर्दै छन्
Sacrum शरीर पूर्ण वजन मान्छ। यो व्यक्ति र एउटा बलियो जडान हिड्ने समयमा स्थिरता प्रदान गर्न अभिप्रेरित छ को pelvic हड्डी। साथै, sacral मेरुदण्ड को विशेष संरचना आवश्यक स्पाइनल नहर तल्लो भाग सुरक्षाको लागि हो। को श्रोणि र कम limbs sacral vertebrae आफ्नो सन्देशको लागि धेरै symmetrically प्रबन्ध खुलने छ। यो रक्त नली र स्नायु फाइबर समावेश छ। Sacral नहर हड्डी को सम्पूर्ण लम्बाइ साथ चल्छ र किनभने sacrum को विशेष संरचना को अलिकति बाङ्गो।
त्यसैले, सबै sacral vertebrae फ्यूज छन्। तिनीहरूले sacrum को रियर सतह मार्फत पारित, एकचोटि अलग थिए पाँच ridges सदृश, तथ्यलाई। यी vertebrae र आफ्नो spinous, transverse प्रक्रियाहरू को फ्युजन, साथै माथिल्लो र तल्लो articular प्रक्रियाहरू देखि arising सानो गांठ छन्। यो संरचना को स्नायु जरा र रक्त नली सुरक्षित राख्दछ।
सुविधाहरू coccygeal विभाग
अझ रोचक coccyx को संरचना छ। यसलाई 3-5 vertebrae, तर अल्पविकसित हुन्छन् र पूर्ण सँगै फ्यूज। को पुच्छर हड्डी को आकार चरा को चुच्चो जस्तो। यसको peculiarity मानिसहरू मा यो sacrum संग अझै पनि पूर्ण जोडिएको छ भन्ने छ। र महिला फिर्ता गर्न बच्चा जन्म नहर पास सुनिश्चित गर्न बाङ्गिएको गर्न सकिन्छ श्रम समयमा। Coccygeal vertebrae पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरु। साथै, तिनीहरूले मेरुदण्ड को आधार हो र आन्दोलन र झुकाव लागि समर्थन प्रदान गर्न, त्यहाँ pelvic अंगहरु र कम चरम गर्न स्नायु जरा धेरै जान्छ।
sacral गर्न क्षति
को aitch हड्डी को बल, साथै pelvic घन्टी बीच यसको स्थिर स्थिति भए तापनि यो विभाग पनि क्षति र चोट गर्न susceptible छ। चल्ने जोइन्टहरूमा मात्र 5th कटि संग 1st sacral वर्टिब्रा को articulation को बिन्दु मा प्रबन्ध गर्दै छन्, र जहाँ pelvic हड्डी जोडिएको बाँकी पक्ष शाखा। यो अक्सर चोट उत्पन्न यी ठाउँमा छ। विभाग मा मात्र चोटपटक र sacral vertebrae एक भंग गर्न सक्छन्।
कारण sacrum को संरचनात्मक सुविधाहरूमा कि मेरुदण्ड अन्य भागमा उत्पन्न सबै भन्दा साधारण चोट लागेको छैन। कुनै intervertebral डिस्क भएकोले त्यहाँ "हर्निया" वा रूपमा कुनै यस्तो निदान छ "discogenic sciatica sacral मेरुदण्ड।" यी तत्व दृढ फ्यूज भएकोले न त, वयस्क मा sacral वर्टिब्रा अफसेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर छोराछोरीको यो किनभने बंधन को विशेष बल र sacrum pelvic हड्डी को सुरक्षा को धेरै विरलै हुन्छ।
को sacrum गर्न क्षति गराउँछ
किन, त्यसपछि, sacrum पनि चोट गर्न susceptible छ? यो धेरै कारण द्वारा बताए गर्न सकिन्छ:
संरचना को मेरुदण्ड को जन्मजात असामान्यताहरु;
, Pelvic भास्कुलर सङ्कुचन वृद्धि आउँछ शिरापरक भीड निम्त्याउँछ जुन sacral नहर, छोडेर संग;
को sacrum उच्च भार मा संयुक्त दानाको एक परिणाम, edema, र ऊतक को स्नायु जरा संकुचन गर्न सुरु रूपमा, आकार बढेको गर्न सकिन्छ।
यी pathologies हड्डी Tissues र आफ्नो शक्ति वृद्धि brittleness को अवरोध गर्न सक्छ। तर sacrum भंग अधिकांश गर्दा यस्तो सडक यातायात दुर्घटना उच्च सेना, उजागर, पतन, धक्का आउँदैन।
सुविधाहरू sacrum चोट
यो मेरुदण्ड चोट लागेको मुख्य सुविधा पनि aitch हड्डी को पालो मा मान्छे सार्न सक्नुहुन्छ। को हिप हड्डी गर्न sacrum जडान धेरै बलियो बंधन, शरीर स्थिर राख्न मदत। तर पछि यो अझै मेरुदण्ड भाग छ, मेरुदण्ड गर्न क्षति हुन सक्छ, रक्त नली बिच्छेद वा स्नायु जरा एक आघात मा सिकार को गतिविधि वृद्धि। यो मनोवृत्ति को नतिजा को pelvic अंगहरु मा जटिलताहरू urination उल्लङ्घनको, तल्लो limbs को पक्षाघात हुन सक्छ। अस्थिभंग एक जवान महिला देखा पर्यो, र त्यो भविष्यमा समसामयिक चिकित्सा सहायता छैन भने यसलाई आफ्नै बच्चा सहन गर्न सक्षम हुने छैन।
के भने क्षतिग्रस्त sacral vertebrae
कुनै पनि चोट पछि, विशेष गरी यदि एक शङ्काको छ को sacrum एक भंग, यसलाई आवश्यक चिकित्सा संस्था लागू छ। व्यावसायिक सहयोग गर्न आफैलाई चिसो क्षति को साइट लागू गर्न सकिन्छ, र गंभीर दुखाइ दुखाइ दबाइ लिन। यस सुनिंनु वृद्धि र सुनिंनु रक्तस्राव र अन्य जटिलताहरु सक्छ हुनेछ यो, यो चोट साइट न्यानो गर्न सिफारिस गरिएको छैन। पीडित समतल सतह मा झूठ र सार्न छैन प्रयास राम्रो छ।
Polimedelovaya फिलिम: समीक्षा। चिकित्सा फिलिम
कसरी औसत व्यक्ति को लागि वृद्धि को वजन गणना गर्न
को सिलेंडर को मूत्र मा के पत्ता गर्छन्?
साइडर स्याउ: क्लासिक र छिटो पेय लागि नुस्खा
ब्लूबेरी: उपयोगी गुण र contraindications